रमितालाई गु’माएका प्रकाश भन्छन : नाम मात्र प्रकाश, तर जीवन अन्धकार भयो ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/रमितालाई गु’माएका प्रकाश भन्छन : नाम मात्र प्रकाश, तर जीवन अन्धकार भयो !
फेरि त्यो दिन… गत बिहिबार कन्चनपुरको महेन्द्रनगरमा टिप्परको ठ’क्कर बाट एक युवतीको मृ’त्यु भयो । जो आज दुलही बन्दै थिइन् । आफ्नो बिहेको निम्तो बाँड्न हिडेकी उनलाई टिप्परले ठ’क्कर दिँदा घटनास्थलमा नै मृ’त्यु भयो ।उनको मृ’त्यु त भयो तर यता उनको हुन लागेका बेहुला प्रकाश पानी बिनाको माछा जस्तै भएका छन् । प्रकाश नेपाली सेनामा कार्यरत छन् ।
सिरहामा प्रहरी निरीक्षकसहित २४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, अबस्था भयाभह बन्दै
निर्वाचन जित्नेलाई विश्वप्रकाशको यस्तो सन्देश, परिक्षा चलिरहन्छ, जनताको विश्वास ओइलाउन दिनुहुँदैन।